Yemahara uye Yakagadziridzwa IPTV Lists | ListaIPTVtelevision.com
IPTV M3U Vakuru
Iwe TV Player
Yemahara uye Yakagadziridzwa IPTV Lists
Imwe yetekinoroji yakachinja mashandisiro atinoita zvevaraidzo ndeye IPTV.
Iwo ane mukurumbira emahara IPTV chiteshi rondedzero ndeimwe yeakanyanya kutsvaga mafaera emhando muna 2022. Uye nechikonzero chakanaka.
Dhaunirodha zvinyorwa zvemahara HERE
Iyo IP terevhizheni protocol (yakapfupikiswa seIPTV) Ipuratifomu inoratidza akawanda mabhenefiti pamusoro pechinyakare terevhizheni, uye kunyange setiraiti terevhizheni.
Kuita kuti iwe unzwisise zvakanakira uye kukuratidza nzira yekuwana yakagadziridzwa zvinyorwa, kutsvaga chiteshi kubva kuSpain kana chimwe chiLatin, uye kuziva. chii ichi system pane yako Smart TV kana yePC, takagadzira zvinyorwa zvinotevera.
Chii chinonzi IPTV uye chinoshanda sei?
IPTV iaudiovisual material yekugovera sisitimu iyo inotora mukana webandwidth kufambisa zvirimo.
Kusiyana nekutepfenyura kuburikidza neOTT (Over The Top), IPTV inoshandisa yakatsaurirwa bandwidth chete nekuda kweichi chinangwa, kuitira kuti machanera agadzirise kumhanya, saka hapana akangoerekana aturika kana kucheka mukutapurirana.
Gore ra2022 rave iro gore rekubatanidzwa kwerudzi urwu rwepuratifomu, iyo inenge inogara ichiperekedzwa neinternet sevhisi kuti ishande nemazvo, sezvo iri mubandwidth yezvirongwa izvi zveinternet izvo zvinogadzirwa.
Nechikonzero ichocho, IPTV terevhizheni inowanzopihwa yemahara pamwe nehurongwa hwefiber, uye zvichienderana nekumhanya kwechirongwa, iwe uchave unokwanisa kusarudza kana kuve neyakajairwa tsananguro (SDTV) kana yakakwira tsananguro (HDTV) mumatanho ako uye muhurongwa hwako hwakakwana.
IPTV tekinoroji muSpain haisi nyowani, uye kwave nemapuratifomu kwemamwe makore akaedza kupa akazara hurongwa rondedzero, kanenge nguva dzose nemubhadharo.
Iye zvino, Movistar + ndiyo yakanakisa muenzaniso weIPTV muSpain, yakamirira nzira dzekufambisa dzezviitiko zvakasarudzika, senge yakakurumbira Partidazo.
Nekudaro, sezvatakambotaura, haisi tekinoroji iri kutanga kushandiswa munyika, kana muLatin conglomerate yese.
Jazztel aive mumwe wemapiyona, pamwe chete naMovistar, yeiyi tekinoroji muSpain. Jazztel TV neYacom aive maviri internet protocol terevhizheni masevhisi, kunyangwe zvisisavepo.
MuLatin America, Movistar Chile neETB (Colombia) ndiwo maviri emakambani akaita kuzvipira kukuru kune iyi tekinoroji iri kure, yatinozoongorora zvakanakira mushandisi. Hongu, kwauri.
Zvakanakira system nhasi
Iyi puratifomu iri kure yekuona terevhizheni muna 2022, ine yakakura boom muSmart TV uye yePC, ine zvakawanda zvakanaka zvatinofanira kuongorora, sezvo izvi zviri izvo zvinoita kuti vanhu vazhinji vafarire IPTV masevhisi, kana kuisa maapplication ku. tarisa chiteshi rondedzero muna 2022.
Zvemukati pamidziyo yese
Imwe yemabhenefiti akakosha eiyi tekinoroji iri kure ndeyekuti, chaizvo nekuti yakavakirwa pabandwidth, inogona kugamuchirwa nekufambiswa nemazvo pane chero chishandiso chakabatana neInternet.
Uye kwete hazvo kune network yekumba, nekuti akawanda masevhisi ane masaini kuburikidza neakagadziridzwa nharembozha anogona kutoshandiswa nehurongwa hwenharembozha. Kunyangwe isingakurudzirwe nekuda kwekushandiswa kwedata kweaya akagadziridzwa maapplication.
Chokwadi mukana we tarisa zvirimo muSpanish, Latin Spanish kana Chirungu, zvakasarudzika zvemukati uye yemhando ipi neipi paSmart TV, pane Android kana iOS nhare, kana paPC chirongwa, chinhu chakanakira kuedza.
Iyo chete mukana hausi wekutakura kure programming, kwese kwese uye pamidziyo yese.
Mukana wakakosha weIPTV, kunyanya muna 2022, mukana wekuwana ega chiteshi uye zvirimo. Uye kwete migero yakasununguka, asi yakazara IPTV programming list.
Uye kunyangwe iwo ari mapuratifomu ekubhadhara, anopa zvemukati zvisingaonekwe chero kupi zvako, senge akanyanya kukosha maligi munyika yenhabvu, semuenzaniso. Asi nekuwedzera, isu tine ruzivo rwakasiyana rwenyika yega yega, tinokusiira iwe zvinongedzo nekudzvanya pamureza wenyika yaunoda pazasi:
IPTV m3u zvinyorwa zveArgentina Yemahara uye Yakagadziridzwa
IPTV m3u rondedzero yeBrazil Yemahara uye Yakagadziridzwa
IPTV m3u zvinyorwa zveChile Yemahara uye Yakagadziridzwa
Yemahara uye Yakagadziridzwa IPTV m3u zvinyorwa zveColombia
IPTV m3u Zvinyorwa zveEcuador Mahara uye Akagadziridzwa
IPTV m3u rondedzero yeSpain Yemahara uye Yakagadziridzwa
IPTV m3u rondedzero yeMexico Yemahara uye Yakagadziridzwa
IPTV m3u rondedzero yeUSA Yemahara uye Yakagadziridzwa
Naizvozvo, kana iwe uri fan weJapan anime chiteshi, Latin cinema, kana iyo yakagadziridzwa IPTV rondedzero yekuona nhabvu Mumwaka wa2022 weavo vane mvumo yekutepfenyura nenzira iyi, kure IPTV tekinoroji ndiyo mhinduro, nekuti kwete chete iwe uchakwanisa kuwana zvese zvirimo zvataurwa chero uine Movistar + premium uye uchibhadhara, semuenzaniso. asi muna 2022 iyi tekinoroji iri kure inogona kuve yemahara. Hongu, yemahara chero zviri pamutemo munyika yako uye zvirimo zvakavhurika uye kodzero dzakapihwa kuti iwe uzviite.
Zvinenge zvisingagumi kupa
Yazvino IPTV terevhizheni inopa ine chimwe chinhu chakafanana: zvakasiyana-siyana zvisati zvamboitika.
Remote programming inopa mabhenefiti akadai sekukwanisa kuona zviteshi zvese zvenzvimbo kana yedunhu chiyero, chero chiLatin chiteshi, chiteshi kubva kuUnited Kingdom kana United States, uye kubva kune chero terevhizheni muEurope neAsia.
Miganhu yevaraidzo inotarwa newe.
Yemahara uye yakagadziridzwa zvinyorwa zveIPTV
Yemahara IPTV rondedzero mafaera ePC uye Smart TVs (uye kazhinji, yeIPTV zvirongwa) inochengeta ruzivo rwakakwana rwezviri mukati kuburikidza nekutepfenyura (maseva ari kure) ezviteshi zveterevhizheni zvakasiyana.
Kubatsira kwezvirongwa izvi ndezvekuti vanochengeta ruzivo rwakagadziridzwa rwemahara emahara, asiwo ematanho akabhadharwa chero uine kodzero dzekudaro uye nezvimwe zvakaita se:
Kubva kumitambo yakaita senhabvu, UFC kana basketball
Kuti uone Movistar Plus kana iwe uine Movistar + Premium
Rondedzero yezvese zveprimiyamu zvemukati kana iwe uine kodzero
Nenzira iyo, iwe unogona kuve neMovistar + yePC chero iwe uchibhadhara kunyorera kwako kuMovistar, Latin bhaisikopo chiteshi (kana chero Latin chiteshi), uye chero yakasarudzika hurongwa pamidziyo yako.
Aya mafaera ane ruzivo rwekuronga ari mukati m3u fomati, uye inoiswa kune zvikumbiro zvinotamba zveterevhizheni neInternet Protocol IP, iyo VLC, kana SSIPTV yePC uye yakagadziridzwa zvinyorwa ndiyo inonyanya kufarirwa, kunyangwe nguva pfupi yadarika iri kuwedzera wiseplay.
*Mamwe malink nekuda kwehuwandu hwetraffic inouya inogona kusashanda panguva ino, edzai ese. Iyo ine bhatani rebhuruu inogara ichishanda. Kuti uchengetedze kugadzikana kwezvibatanidza kwenguva yakareba sezvinobvira, ivo vanodzivirirwa, kuti uwane iwe unongoda kunyoresa.
IPTV Sports Lists (Yakagadziridzwa 2022)
Spanish IPTV Lists (Yakagadziridzwa 2022)
Latin IPTV Lists (Yakagadziridzwa 2022)
Vakuru IPTV Lists +18 (Yakagadziridzwa 2022)
IPTV Mafirimu Mazita (Akagadziridzwa 2022)
IPTV Series Lists (Yakagadziridzwa 2022)
Iwe unogona kuona mamwe machannel chaiwo mune zvinotevera zvinyorwa:
Yemahara uye Yakagadziridzwa Exabyte TV Mazita
Yemahara uye Yakagadziridzwa IPTV Yakanyanya Mazita
Yemahara uye Yakagadziridzwa Vakuru M3U IPTV Lists
Yemahara uye Yakagadziridzwa ChiLatin M3U IPTV Mazita
Yemahara uye Yakagadziridzwa IPTV M3U Movistar Lists
Yemahara uye Yakagadziridzwa IPTV Smarters Pro Lists
Maitiro ekugadzirisa emahara mazita eIPTV
Iko kugona kugadzirisa Smart TV, chirongwa chePC kana nharembozha inoshamisa. Kwete kuganhurirwa kune Smart TV yekuona TV, zvinoshamisa.
Pakazosvika 2022, aya mapuratifomu ari kure uye emazuva ano ane zviwanikwa zvesoftware zvinoenderana nemidziyo yese.
Kuti utaure mienzaniso, kune zvirongwa zvePC zvechero system yekushandisa. Kune Windows PC kune dzimwe nzira dze32-bit uye 64-bit processors, dzakabhadharwa uye dzemahara, pamwe nemaPC ane HD playback tekinoroji nekuda yemahara yakagadziridzwa m3u zvinyorwa.
Panyaya yeSmart TVs, kune zvikumbiro zvemuno zveanonyanya kufarirwa mhando dzeSmart TVs. Semuenzaniso, iwo akagadziridzwa maapplication eSmart TV anotsigira ari kure TV anopa maapps eSamsung, Philips, Sony, Hisense, Panasonic, uye LG.
Uye pamusoro pezvirongwa zvePC neSmart TV, panharembozha uye paApple TV kana Android Bhokisi iwe uchawanawo maapplication akagadziridzwa kuti unakirwe nezvirimo.
Anofarira nezvemakomputa uye cinema. Computer Injiniya anoedza kurerutsa hupenyu kune vanoda mafirimu, akatevedzana uye kuona chero TV online.
Mhoroi makaita sei list ye ottplayer, ndiri mutsva kune izvi. Ndatenda
PaOTTPlayer peji: https://listaiptvtelevision.com/ottplayer-listas-gratis-para-pc/
manheru akanaka, ndinoda kunyoresa asi handizivi kuti sei, ndatenda
Joseph Lopez inoti:
Inotsanangurwa pamusoro apa.
edilberto arcila inoti:
Meu rondedzero ine hozhwa uye rcn yakagadzikana uye yemahara
Ndinoda chinhu chakatsiga mahara, handina basa nazvo kuti ndikachiona nyangwe chakachekwa maminetsi ese chakakodzera
emahara ssiptv zvinyorwa
Patrick Zambrano inoti:
ndingawana sei m3u list ye kodi
Masikati akanaka, ndinokukorokotedza, ndinogodora zvakanaka
Zvinokanganiswa sei nekudonha kweXtream?
Ndingawana sei mazita e ssiptv??
Marcelo Gustavo del Valle inoti:
Mhoro, mungandipewo URL yeSSIPTV ndapota, ndatenda?
iyo iptv ndiyo yakanyanya kugadzikana ine chiteshi ini ndinogara ndiine matambudziko ne telemundo, univision nezvimwe
Ndokumbira undiudze nzira yekubatanidza ssiptv yangu kune yako zvinyorwa? Ndokutenda zvikuru
Ini ndinoda ssiptv rondedzero yemitambo yeSpanish neChirungu ligi, mumwe munhu anogona kundibatsira kana kugovera kero ndapota...!
ndingawana sei itv codes dzetv
ndine hurombo neiyo itpv macode, ndiani wandingabata netsamba kune macode emidziyo uye tv
Ini ndinowana sei iptv zvinyorwa zve smart tv
Ini ndinoda iptv zvinyorwa zve smart tv
mhoro kukwanisa kuona nhabvu yeArgentina mahara
LUIS A. GARCIA NUNEZ inoti:
ndingawana sei mazita akavhurwa… Ndinobva kuNuevo Leon, Mexico… kune Smart TV yangu?
Raul Rios inoti:
Ungandizivisa here kana codi ichiri kushanda.. thanks
Hongu, ichiri kushanda.
mhoro unogona kundipa url ye ssiptv ndatenda
mhoroi mamukasei ndangove nhengo manje ndoiona sei formula one
ndinokutendai zvikuru mauro anobva kuuruguay
Mhoro uko. Ini ndinogona kuwana Yemahara Rondedzero YeAppSSiptv yeLG TV, ndatenda
micaela p inoti:
Mhoro, pane application yekuona zviteshi kubva kuUruguay, Argentina, nhabvu yeandroid 9.0 tv box
manuel benites inoti:
Mhoro mubvunzo wakanaka ndingaite sei ndine yemahara iptv runyorwa
Unogona here kundipa iptv runyorwa rwevana chiteshi uye mafirimu 2020
Ini ndinoda yakakomba IPTV ine chiteshi kubva kuArgentina kana paine anoziva ndapota ndinyorere
Ndiri kutsvaga rondedzero yemachaneli kubva kuChina, Hong Kong, Taiwan...
Iwe unoziva chero webhusaiti inazvo?
JOHN SANCHEZ inoti:
PR PLEASE M3U rondedzero YEDUPLEX IPTV
Ndinoda kuziva rondedzero ye ss iptv Colombian chiteshi ndapota
Kleber Collaguazo inoti:
Ungade kuziva sei kana kudhawunirodha app isiri yekuzvarwa kune smart tv kungakuvadza mudziyo wangu?
Iwe unoreva kuti yakagadzirwa nevagadziri vekunze? Kwete, yakafanana nefoni yeAroid, chero chinhu chaunotora kubva kuPlay Store chinogadzirwa nekambani isiri Android.
chii chinonzi url yetyc sports?
Izvo zvingave zvakanyanya kugadzikana handinetseki kubhadhara chero isingamire
Masikati akanaka, ndine Sony Bravia uye handikwanise kuisa chero runyorwa rweSpanish kana chiLatini, ini ndinogara ndichiwana Connection Yakundikana, mungandibatsirewo here? wazviita
Ndingaite sei kuti ndiwane rondedzero yemachaneli ndibatsireiwo ndapota?
Iwe une rondedzero yeese premium iptv chiteshi ipapo compi.
Wilson Betancourt inoti:
Mhoroi, ndini Wilson Betancourt.
Ini ndinobva kuColombia, ndiri quadriplegic nekuda kwetsaona makore anopfuura makumi maviri apfuura, uye handina terevhizheni yetambo nekuda kwematambudziko ehupfumi.
Ini ndoda kuwana yakagadzikana uye inogara yakavanzika m3u runyorwa, ye smar tv
ine premium chiteshi, asi handina kukwanisa kunyangwe ndakaedza zvakaoma sei.
Ndapota ndidzidzisei maitirwo acho, ndingazotenda nekusingaperi.
pindura. [email inodzivirirwa]
Mhoro, unogona kundipa runyoro rwekuona F1 mahara?